खै कसरी सक्छ यार, जिन्दगीले जिन्दगीलाई छोड्न ! - Everest Dainik - News from Nepal
खै कसरी सक्छ यार, जिन्दगीले जिन्दगीलाई छोड्न !
त्यो उदासिलो यथार्थमा फर्कि‌दैछु
डोबमा मलाई छोडि जाँदैछौ
अब भो म सक्दिनँ
मुटु थररररर काँप्यो
म बाँचुला जसाे तसो
तिमिसँग यात्रि बनेर
माग्नु छ बाँकि हिसाब किताब
भावना बराबरको जिउँदै बाचेपनि
भावना बिरामी परेर
म त बस प्रेम सिक्दै थिए
मैले तिमि बाहेक केहि खोजिन्!
तिम्रो सिउदोमा अरु कसैले
गाडि कुदाउँछ भने
म पैदल यात्रि हुँ
उसँग केही छ
मसँग केही नै छैन्
मसँग बस प्रेम छ
उसँग त सबथोक छ
म बहुला निस्किएँ, तिमी शातिर खेलाडी !
गर्दै हिडिरहदा मैले मेरो पैतालालाई
काँडा कहिले फुल नबन्ने रैछ !
अहिले म आफैसँग डेटिङमा छु
सोचले सोचेको हुँ सोचलाई सोचेरै मेटाईदिउला !
र, त प्रेमले जित्ने हिम्मत राखेन !
मृत्यु निलि यसैलाई फ्याली
र त कहिले हारेकै छैन्
यहाँ अौपराचिक परिचय
प्रेम शब्द हो यसको अर्थ शून्य हो
ट्याग्स: कविता, प्रेम